Chii chinonzi CNMV | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi CNMV
Encarni Arcoya | 23/09/2021 17:03 | Yakagadziridzwa ku 30/09/2021 17:27 | General hupfumi
Zvirokwazvo pane imwe nhambo wakambonzwa nezve CNMV. Nekudaro, iwo mazita anonyatso kuviga chakakosha muviri, Unoziva here kuti chii chinonzi CNMV?
Pazasi isu tinojekesa kuti uyu mutumbi unorevei, ndeapi mashandiro awo, ndiani anouumba, ndeapi mirau yacho uye zvimwe zvibodzwa zvaunofanira kufunga nezvazvo.
1 Chii chinonzi CNMV
1.1 Unobva kupi
2 Mabasa eCNMV
3 Ndiani anoumba CNMV
3.2 Executive komiti
3.3 Advisory komiti
4 Ndiani anotonga
5 CNMV mirau
Iyo CNMV ndicho chirevo icho ivo vanosanganisira National Securities Market Commission. Mune mamwe mazwi, icho chikamu chine chinangwa chekutarisira misika yekuchengetedzwa muSpain uye kuti izvi zvinoenderana nekushanda pamwe nemitemo yakabvumiranwa.
Sekureva kweRAE, ichi chinhu chinogadziriswa seinotevera:
“Vakuru vakazvimirira vehutungamiriri vane chinangwa chekutarisa nekuongorora misika yekuchengetedza uye mashandiro evanhu vese vepanyama uye vepamutemo vanobatanidzwa mumigwagwa yavo, kushandiswa pamusoro pavo kwesimba rekubvumidza uye mamwe mabasa avanogona kupihwa. mutemo. Zvimwechetezvo, zvinovimbisa kujeka kwemisika yekuchengetedza, kuumbwa chaiko kwemitengo mavari uye kuchengetedzwa kwevanosima mari, kukurudzira kufambiswa kwechero ruzivo rwunodiwa kuti uone kuzadzikiswa kwezvinangwa izvi ”.
Iyo CNMV yakagadzirwa apo iyo Mutemo 24/1988, weStock Market, iyo yaifunga shanduko yakazara muSpanish yezvemari system. Kwemakore, yakagadziridzwa kuburikidza nemitemo yakaibvumidza kuti ienderane nezvikumbiro uye zvisungo zveEuropean Union, kusvika parizvino.
Kubva panguva iyoyo, imwe yemamishini ayo ndeyekuunganidza ruzivo kumakambani akanyorwa paStock Exchange, pamwe nenyaya dzekuchengetedzeka dzinoitika kuSpain, pamusoro pekutarisa iko kufamba kunoitika mumusika kana kushandira varimi. Kunyangwe ivo chaizvo vaine mamwe akawanda mabasa.
Tinogona kutaura kuti iyo Chinangwa chikuru cheCNMV ndechekuti, pasina mubvunzo, kutarisa, kutonga uye kugadzirisa misika yese yekuchengetedza iyo inoshanda muSpain, kuitira kuvimbisa kuchengetedzeka, solvency uye kuchengetedzwa kwenhamba dzinopindira mariri. Nekudaro, basa iri harisi nyore, uye handiro chete iro ravanoita.
Uye ndezvekuti, pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro apa, ine mamwe marudzi emabasa, sekupa ISIN (International Securities Identification Number) uye CFI (Kurongwa kweMari Zviridzwa) makodhi kumatunhu ekuchengetedza anoitwa muSpain.
Izvo zvinoshanda zvakare kuraira Hurumende neHurumende yeEconomy, pamusoro pekushingairira kutora chikamu nematanho epasi rose.
Pawebhusaiti yaro tinogona kuona mashandiro uye chimiro chezviito zveKomisheni iyi zvine chekuita nemisika yepuraimari nesekondari, kubviswa, kubhadhara uye kunyoreswa kwemasecurity pamwe neESI (Investment Services Makambani) uye IIC (Mari uye Makambani Ekudyara ).
Ndiani anoumba CNMV
Chimiro cheCNMV chakagadzirwa ne Mbiru nhatu dzakakosha: iyo Kanzuru, Advisory Committee, uye Executive Committee. Nekudaro, kune zvekare vatatu vatungamiriri, vekutarisa zvinhu, yekutarisira musika uye imwe yebasa repamutemo.
Kutsanangura chimwe nechimwe chazvo tinacho:
Bhodhi iri rinotarisira masimba ese eCNMV. Yakagadzirwa ne:
Mutungamiri neMutevedzeri weMutungamiri. Ava vanogadzwa neHurumende kuburikidza negurukota rezvehupfumi uyo ndiye anovakurudzira.
A General Director weHaimari uye Zvemari Policy uye Mutevedzeri Gavhuna weBhangi yeSpain. Ndivo vakazvarwa maPangamazano.
Vatatu Vanopa Mazano. Ivo vanogadzwa zvakare negurukota rezvehupfumi.
Secretary. Mune ino kesi, uyu mufananidzo ane izwi, asi hapana vhoti.
Pakati pemabasa anoitwa neKanzuru ndeaya:
Bvumidza Masekondi (kubva kuchinyorwa 15 cheMutemo 24/1988, yaChikunguru 28), iyo Yemukati Mitemo yeCNMV, yekutanga mari yekunyorwa mabhajeti eKomisheni, mishumo yegore rose zvichienderana nechinyorwa 13 cheMutemo 24/1988, yaJuly 28, uye chinyorwa 4.3 cheiyi Mitemo uye Chirevo pane iro basa rekutarisa reCNMV. Ichave zvakare iri basa rekudoma nekudzinga General Directors nemaDhipatimendi madhairekitori, pamwe nekumisikidza Executive Committee uye kukwidza maakaundi maakaundi kuHurumende.
Izvi zvinoumbwa nemutungamiri wenyika uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika, makanzura matatu uye sekirariari. Pakati pemabasa ayo ndeaya:
Gadzirira uye uongorore zvinhu zvinofanirwa kuendeswa neCNMV Board, kudzidza uye kuongorora zvinhu zvasachigaro, kuratidzira zviito nemasangano anotonga eKomisheni, bvumidza kutora kweKomisheni midziyo uye kugadzirisa mvumo yekutonga.
Yakagadzirwa nemutungamiriri wenyika, vanyori vaviri uye vamiririri vezvigadzirwa zvemusika, vanopa, vatengesi uye zvikwereti uye masangano einishuwarenzi. Inosanganisirawo vamiririri vemapoka ehunyanzvi, nyanzvi dzekuremekedzwa kunozivikanwa, vamiririri veInvestment Guarantee Fund uye yeVanhu Vakazvimiririra vane musika wechipiri wepamutemo.
Kunze kweaya makuru manhamba, CNMV ine General Directorate yeMasangano, imwe yeMisika, imwe yeZvemitemo Service, imwe yeStrategic Policy neInternational Affairs. Pamusoro peDhipatimendi reMukati Kudzora, Ruzivo Masystem, General Sekretarieti uye Kutaurirana Dhairekitori.
Zvino zvaunoziva zvishoma zvishoma nezve CNMV, Iwe unoda kuziva kuti ndivanaani vanhu uye / kana makambani ayo aanogadzirisa? Kunyanya isu tinotaura nezve:
Makambani anopa masheya mumisika yepuraimari neyechipiri.
Makambani anopa mabasa ekudyara.
Iwo anonzi mafintech makambani.
Makambani ekudyara pamwe.
Izvi zvinobvumira varimi kuti vawane rutsigiro rweichi institution kana vachiisa mari mumusika wemasheya nezvose zvivimbiso uye chengetedzo.
Iyo CNMV inotongwa nemirau miviri, inova iyo inodzora basa rakanaka remuviri uyu. Kune rimwe divi, Mitemo Yemukati yeCNMV. Kune rimwe racho, kodhi yemafambiro.
Ehezve, hatifanirwe kukanganwa nezveMutemo 24/1988, yaChikunguru 28, paStock Market, uye neshanduko dzayo dzakasiyana mumitemo inotevera.
Izvozvi zvave kujekesa kwauri chii iyo CNMV?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi CNMV
Ndeupi musika unopfuurira